Ilaa iyo inta wakhtiga shirku ku eg yahay dhulka, nimcadu way khusaysaa. Hadda qof kasta ayaa u imaan kara Ciise oo ay badbaadi!
Mid ka mid ah sababaha ay dadka qaarkii ugu khaldamaan in Ilaah xukun u diro waxay tahay in ay sharciga ku dhawaaqaan. Sharcigana awgeeda waxay gaarayaan go'aan qaldan goorta dhibaatada weyn soo fuulayso.
Laga sii daayay xukunka
Rooma 3: 16-18. Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in ku alla kii isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah. 17 Maxaa yeelay, Ilaah Wiilka uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga. 18. Kii isaga rumaystaa ma xukumna, laakiinse kii aan isaga rumaysan, hore ayaa loo xukumay, maxaa yeelay, wuxuusan rumaysan magaca Wiilka Ilaah oo keliya oo dhashay.
Macnaha guud oo dhan wuxuu ina barayaa in Ilaah u soo diray ciise inuu badbaadiyo - inaga badbaadiyo xukunka. Dadka oo dhami waa la cambaareeyaa, laakiin waxay ku sii daayaan xukunka markay helayaan Ciise. Haddii sabab uun aadan doonaynin inaad hesho Ciise, xukunka ayaad ku sii jiri doontaa.
Macnaha Kitaabka Quduuska ahi ma dhahayo in Ilaah xukunno soo diro, laakiin waxa ereygu leeyahay ayaa ah in Ilaah u soo diray Ciise inuu badbaadiyo oo inaga badbaadiyo xukunka. Waa wax bilaa akhbaar ah iyo khiyaano ah in lagu dhawaaqo in Ilaah uu hadda u soo dirayo xukunno cudurro faafa (sida coronavirus), dagaalladii iyo masiibooyinka waqtiga shirka iyo nimcada.
Macnaha Kitaabka Quduuska ah ee aan hadda aqrino ayaa si cad u sheegaya in Ilaah uusan u soo dirin Ciise inuu xukumo adduunka laakiin inuu badbaadiyo.
Dabcan, Ilaah maaha inuu adduunka xukumo maxaa yeelay waa horeba waa la halaabay! Iyo si lagu siidaayo oo loo badbaadiyo xukunkan waxaad ubaahantahay inaad hesho Ciise oo aad badbaadi doontid.
Ciise sidoo kale wuxuu qaatay xukun oo naftiisa ciqaabay markuu ku dhintay iskutallaabta dusheeda ee meesheena. Markuu Ciise xukunka qaatay, waannu dambi dhaafnay. Oo waa la iska sii daayay, oo waxaynu noqon doonnaa rumaysad xagga isaga.
Haddii hadda naloo xukumay xukunkii Ciise, ka dibna Ilaah mar dambe ma adeegsan karo xukunka annaga. Ciise hore ayuu u qaatay!
Mid ka mid ah sababaha ay dadka qaarkii ugu khaldamaan in Ilaah xukun u diro waxay tahay in ay sharciga ku dhawaaqaan . Sharcigana awgeeda waxay gaarayaan go'aan qaldan goorta dhibaatada weyn soo fuulayso.
Si wada jir ah loogu dhawaaqo noocan oo kale ah, mid ka mid ah meelaha rayrayn ka dib dhibaatadii weynayd ayaa dillaacday, taas oo gebi ahaanba aan kitaabiga ahayn. Taasi waa sida ay ku gartaan go'aanka ah in Eebbe xukun ku soo diro cudurada, cudurada faafa, dagaalada iyo masiibooyinka. Laakiin Baybalku wuxuu si cad u barayaa in waxyaalaha caynkaas ahi ayan xagga Ilaah ka imaan.
Rooma 8: 1-4 Sidaas daraadeed xukun ma laha kuwa iska leh Ciise Masiix . 2 Waayo, qaynuunka ruuxa ee ku dhex jira nolosha Ciise Masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada. 3 Wixii aan sharcigu samayn karin, maxaa yeelay wuxuu ku yaraaday dabeecaddeena jidhka, ayuu Ilaah sameeyey. Markii uu wiilkiisii ​​u daayay sidii nin dembi leh oo uu u soo diray sidii qurbaan dembi, isagu wuxuu xukumay dembigii nin galay. 4 Haddaba shuruudaha sharciga xaqnimada ayaa lagu buuxin karaa kuwa ku nool ruuxa ee aan ku noolaan dabeecadda jidhka. (Baybalka 2000)
Rom 8: 1-4 Sidaa darteed ma jiri doonaan ciqaab kuwa ku jira Ciise Masiix . 2 Waayo, sharciga Ruuxa ee nolosha Masiixa ku noolaanaya ayaa inaga xoreeyey sharciga dembiga iyo dhimashada. 3 Sharciga ayaa loo daciifiyey maadaama uu yahay dabiiciga dembiga awgiis, ma uusan samayn karin wixii Eebbe ku sameeyay isagoo Wiilkiisa u soo diray qaab nin dembi leh, oo qurbaan dembi ah. Markaas ayuu xukumay dembigii jidhkiisa ku jiray. 4 Haddaba sharciga xaqnimada ayaa inagula buuxsami doona annagoo aan ku hoggaansanayn bini-aadmiga, laakiin Ruuxa lihi. (NuBibeln)
Rooma 8: 1-4. Sidaas daraaddeed, haatan xukun ma leh kuwa Ciise Masiix ku jira , kuwa aan jidhka u socon, laakiinse waxay ku socdaan Ruuxa. 2. Waayo, sharciga Ruuxa nolosha ee ku dhex jira Ciise Masiix ayaa iga xoreeyey qaynuunka dembiga iyo dhimashada. 3. Maxaa sharciga aan ugu suurtoobi karin, maxaa yeelay, itaaldarradiisu way ku itaal darnaatay, Ilaahse markuu Wiilkiisii ​​u soo diray si uu ugu ekaaday jidh dembi leh iyo dembiga aawadiis ayuu dembiyadii jidhka ku xukumay; Innagoo aannan jidhka ku noolaan, laakiin Ruuxa ku nool. (KJV)
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 04:49